Epistily ho an'i Filemona - Wikipedia
Ny Epistily ho an'i Filemona na Epistola nosoratan'i Masindahy Paoly ho an'i Filemôna na Taratasy nosoratan'i Masindahy Paoly ho an'i Filemôna dia boky ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Testamenta Vaovao izay isan'ireo atao hoe epistily. Taratasy nosoratan'i Paoly ho an'i Filemona izany. Naman'ireo atao hoe Epistily pastoraly nosoratan'i Paoly io epistily io. Misy toko iray monja ity boky ity.
2 Fotoana sy toerana nanoratana
Επιστολή προς Φιλήμονα / Epistolê pros Philemona no fiantsoana azy amin'ny teny grika fa Epistula ad Philemonem kosa amin'ny teny latina.
Fotoana sy toerana nanoratanaHanova
Tany am-pigadrana no nanoratana'i Paoly ity taratasy ity, tokony ho tamin'ny taona 62 taor. J.K., tamin'ny fotoana nahavoafonja azy tany Roma. Ity taratasy manokana ity dia mety nalefany miaraka tamin'ny taratasy ho an'ny Kristiana rehetra tany Kolosia, dia ny Epistily ho an'ny Kolosiana, izay nampitondrainy an'i Tikiko.
Miresaka raharaha manokana tsy itambarana amin'ny olon-drehetra ny taratasy (na epistily na epistola) nosoratan'i Paoly ho an'i Filemona. Taratasy fiarovana ny mpanompo (andevo) atao hoe Onesimo, izay niova ho Kristiana nanaraka an'i Paoly taorian'ny fandosirany avy any amin'ny tompony atao hoe Filemona, izay Kristiana amin'ny tanànan'i Kolosia. Niangavy an'i Filemona handray an'i Onesimo sahala amin'ny rahalahy sy hamena ny helony i Paoly.
Ity taratasy ity dia mampiseho ny tokony ho fomban'ny Kristiana tamin'ny taonjato voalohany manoloana ny fanandevozana. Tsy manoro fomba fifampitondrana voafaritra mazava amin'ny antsipiriany tokony hananan'ny Kristiana manana mpanompo (andevo) i Paoly, fa mangataka azy ireo mba handray ny mpanompony hifanaraka amin'ny finoana maha Kristiana azy ireo.
Ny tena misongadina ao amin'ity epistily ity dia ny hafanam-pon'i Paoly miresaka momba ny raharahan'ny tsirairay manokana sy olana maro mahakasika ny daholobe.
Io zavatra nataon'i Paoly hanatsarana ny fifandraisan'i Onesimo sy i Filemona io no nataon'i Kristy hihandraisan'ny Kristiana amin'Andriamanitra: mitsetra (Fil. 10.20), manelanelana (Fil. 9.10), manefa trosa (Fil. 18.19).
↑ Jereo: Epistily ho an'ny Kolosiana 4.7-9
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_ho_an%27i_Filemona&oldid=1038775"
Dernière modification le 12 Oktobra 2021, à 10:33